हे – भगवान श्रीमान बि’तेको दुई महिनामा छोरी गु’माइन्,…. – News Nepali Dainik
हे – भगवान श्रीमान बि’तेको दुई महिनामा छोरी गु’माइन्,….
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ समय: २०:५३:०८
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त माथि भएको घट,नामा संलग्न ब्यक्ति प,क्राउ परेका छैनन् । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ को चडेपानीमा त्यस्तै घ’टना भएको छ । अहिले पुरै गाउँ शो’कमा डुवेको छ । गाउँकी होनहार किशोरी भागरथी माथि भएको घ’टनाले गाउँलेका आँ’खाबाट पनि अविरल आँ’सु बगिरहेका छन। उनीहरुका आँ’सु रोकिएका छैनन्।
भागरथीले सबैलाई च’टक्कै छोडेर गएको प’त्यार लागिरहेको छैन। तर लवलेक सामुदायिक वनको बनमाराको झा डी मा भगीरथीको श’व फेला परेको थियो । उनको श’वको प्रकृति हेर्दा पनि निर्मला पन्तकै जस्तो घटना भएको प्रहरीले अ’नुमान गरेको छ । उनको क’पडा च्या ति ए का छन् भने श रि र मा पनि डा म देखिएका छन् ।
स्कूलवाट घर फर्कदा भगिरथी हराएकी थिइन् । घटनास्थलमा उपस्थित प्राय सबैका आँ’खा र’साएका थिए। स्थानीय सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयबाट बुधबार घर फर्किने बेला नै सम्पर्क वि’हीन भएकी भागरथीको विषयको अप’त्यारिलो खबर उनीहरु सबै स्वीकार्न विवश छन्।
पति वियोगको आँ’सु नथामिदै छोरी गु’माउन पुगेकी द्रोपतीले त्यतइ ठूलो चो ट सहन सकिनन् । बुधवार हरा’एकी छोरी घर फर्कली भन्ने आ’श गरेर बसेकी आमाले सहनै नसक्ने घ’टनाको सामना गर्नुपरेको छ । बिहीबार साँझ छोरीको मृ’त्युको खबरपछि उनी बे’होस नै भइन्।
सुगरका बिरामी श्रीमानलाई गु’माएपछि साहारा बनेकी छोरी सदा सदाका लागि छोडेर गएपछि उनलाई बोलाउँदै घरी–घरी भक्कानिन्छिन्। वुवाको नि’धन पछि परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी थपिएपछि उनका छोरा भर्खर भारत कमाउन गएका थिए । बहिनीको घ’टना थाहा पाएपछि उनी पनि फर्कदै छन् ।
ठुलो मान्छे बनाउने धो’को राखेर पढाइरहेकी छोरी बुढेसकालको सहारा बन्ला भन्ने सोचेकी उनले कलिलैमा यसरी छोडेर जालिन् भन्ने सोचेकै थिइनन् ।
गाउँका अरु महिलाहरुले द्रोपतिलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा भारतको दिल्लीमा रहेको जेठो छोरा फर्किरहेको छ। घर खर्च चलाउन र बहिनीको पढाई ख’र्च जुटाउन स’मस्या भएपछि नै कक्षा १० मा पढ्दा पढ्दै उनी भारत पसेका थिए।
बुवाको किरियामा बसेकी आमालाई भागरथीले नै घरको सबै काममा सघाउने गरेकी थिइन्। तर उनको खुसीमाथि कुन पापीले आँखा लगायो। भागरथीको ब-ला ‘त्का-र पछि ह’ ‘त्या भएको आ’शंकामा प्रहरीले अ’नुसन्धा’न कार्य गरिरहेपनि न्या’य पाउनेमा वि’श्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
Last Updated on: February 6th, 2021 at 8:54 pm